वाणिज्य बैंकहरु को नाफा घाटा, कुन बैंकको कति ? | Yangwarak Focus
Home अर्थ वाणिज्य बैंकहरु को नाफा घाटा, कुन बैंकको कति ?
वाणिज्य बैंकहरु को नाफा घाटा, कुन बैंकको कति ?
५ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०७:१०
मङ्सिर ५, याङ्वरकफोकस / चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा धेरै वाणिज्य बैंकको नाफा घटेको छ ।
एभरेष्टको ५१, हिमालयनको ४७ र स्टान्डर्ड चार्टर्डको ३७ प्रतिशतले नाफा घटेको छ । त्यस्तै नाफाका आधारमा अन्तिम स्थानमा रहेको सिभिल बैंकको ३९ प्रतिशतले घटेको छ । कोभिड-१९ को असरले वाणिज्य बैंकहरुको नाफा अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको हो । रासस
Previous articleअब छोरा छोरीलाई टिक टकमा गलत भिडियो हेर्न बाट रोक्न सकिने
Next articleलामो दुरिमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा अनलाइन प्रणाली सुरु
सुमन सहयात्री - ५ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०७:१०